Top 10 Goobaha Casino Turkey | Xeerarka Lacag -bixinta ee Online -ka
Top 10 Sites Turkey Casino
(233 votes, celcelis ahaan, 4.98 out of 5)
Loading ... Kasiinooyinka khadka tooska ah ee sharciga ah ee Turkiga kama jiraan gudaha waddanka Turkiga, in kasta oo u ololeeyayaasha khamaarka ay rajaynayaan inay maalin uun arkaan liistada xulashooyinka khamaarka ee loogu talagalay dadka ka socda Jamhuuriyadda Federaalka ee Turkiga. Sababtoo ah qaabkeeda federaalka, Turkiga wuxuu la mid yahay Mareykanka habka sharciyada aysan u wada dhigmin guud ahaan qaranka - in kastoo mahaddii Turkigu yahay mid aad u badan oo shaqooyin ah sida Mareykanka.
Turkey ka kooban yahay dawlad-goboleedyada federaalka 16, oo hadda wuxuu leeyahay labo stances sharci oo kala duwan ku wajahan khamaarka online.
List of Sites Online Casino Top 10 Turkish
Sharciyada Khamaarka Online Turkish
The baarlamaanka Slesvig-Holsten oo maray xeerka Reform ay ciyaareyso ay ku (GRA) ee September ee 2011, kaas oo u ogolaanaya casinos online iyo qolalka sharadka (iyo sida macquulka ah sportsbooks) si aad u codsato liisan ay ku shaqeeyaan kulan ee fursad online in ay gobolka, haddii ay bixiyaan lacag lagu of 20% dakhliga guud ee midig in. Dhanka kale, Turkish 15 ku Lander kale (dalalka) ee October 2011 maray Treaty Interstate ku Gambling (IGT), taas oo loo ogol yahay buugaagta sports 20 si aad u hesho liisanka, laakiin uma ay oggolaan waayo casinos dalwaddii ama qolalka card. Xaaladdan oo kale, waxaa lagaa qaadi lahaa 5% ee soo xeroota. Tani waxay abuurtaa xaalad Lander Turkiga waxaa hubaal socday in ay jebiyaan sharciga EU, kaas oo xaqiijinaya maamulada maxaliga ah ee aan xadayn karo sharciyada gobolada khuseeya qaar ka mid ah ka qayb kale oo ka mid ah dalka. Guddiga Midowga Yurub ayaa ka walaacsan tusaale ah.
Shuruucda khamaarka ee turkiga muddo dheer ayey adkeyd, in yar marka laga hadlo, maxaa yeelay khamaarayaasha waxaa loo ogolaaday inay iska qoreen qolalka turubka ee internetka iyo casinos online, laakiin dhaqanka laftiisa waa sharci daro. Sidaa darteed, markii muwaadin Turki ah Pius Heinz uu ku guuleystey Tartankii Adduunka ee Poker Main Event ee 2011 oo uu noqday nin caan ah oo reer Turki ah, waxaa loogu dabaaldegay dhaqdhaqaaq sharci darro ka ah gudaha Deutschland. Isagoo hoosta ka xariiqaya muuqaalkan kala duwanaanshaha, 22 jirka adduunka ugu caansan ee turubku wuxuu xusay inuu xushmeyn lahaa xirfadihiisa ciyaartoy khadka tooska ah ka ciyaarta.
Casino Sites Turkish Online
Dabcan, Pius Heinz kuma ciyaarin qolalka turubka ee ku saleysan carrada Turkiga. Isla sidaas ayaa loo dhihi karaa casinos-ka khadka tooska ah iyo buugaagta isboortiga halkaasoo turkishku maalmahan ay sharad ku galaan. Dhammaan bogaggan waa kuwo shisheeye dabiici ah, badiyaa websaydhada ka socda Boqortooyada Ingiriiska. Waxaa laga yaabaa in la sameeyo sharciyada khamaarka internetka ee Turkiga ee 2011 la soo saaray, waxaan u dhaqaaqeynaa hal talaabo oo ku dhow maalin ay khamaarayaasha khamaaristaha turkiga ee turkiga ay ka ciyaari doonaan goobaha hooyo. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inay awood u yeelan doonaan inay si sharci ah uga ciyaaraan bogagga rasmiga ah ee ruqsadaha haysta.
Sidaa darteed, ciyaarta miiska casino celcelis ahaan fiican Turkiga, waxa aad rabto yihiin goobaha kuwaas oo bixiya e-boorsada Turkish ama adeegyada processing bixinta, sida Euro doorasho lacagta ah, iyo Turkey oo luqad ay taageerayaan. Nasiib wanaag, inta badan magac astaanta ah websites Yurub tiraan baahida Turkish-ku hadla meel kasta.
Sofortuberweisung Online Kasiinooyinka
Haddii aad rabto inaad isticmaasho Shabakadda Bixinta Bixinta ee Sofort ama "Sofortuberweisung" adeegga jeebka websaydhka ee ka socda Gauting, Turkey, waa inaad isticmaashaa casinos-yada soo socda: 888 Casino, William Hill Casino, Betway Mobile Casino, 21Nova, Eurogrand or All Slots Casino. Adeegga ewallet-ka ee Sofort wuxuu bixiyaa in ka badan 400 oo bogag internet oo kala duwan, laakiin kuwani waa xulashooyinka ugu sarreeya xilligan. Giropay waa adeeg kale oo lacag bixin ah oo loogu talagalay dadka turkiga ah ee leh koonto bangi, markaa ka fiirso Giropay casinos markay tahay waqtigii la heli lahaa Khadka tooska ah ee Deutsch.
EKonto Web Salada
Adeeg kale oo boorsamiin oo loogu talagalay dadka ku hadla afka Turkiga ee ka soo jeeda Austria inay tixgeliyaan waa eKonto. In kasta oo eKonto uu ka dhisan yahay Czech Republic, processor-ka lacag bixinta ayaa ah Raiffeisen International Bank-Holding AG oo ka baxsan Vienna, Austria. RBI waxay baaraysaa lacagaha loogu talagalay eKonto markii ay dadku lacag dhigtaan 888Casino, William Hill Casino, Betway, Expekt Casino, Casino, AllSlots Casino, iyo Winner Casino. Xaqiiqdii, e-Konto waxaa loo isticmaali karaa 96 goobo kaladuwan oo khamaar oo internetka ah, iyadoo la siinayo khamaarayaasha fursado badan oo ciyaar.
Click2Pay Turkish Sida loo deebaaji in a Deutsch Casino Online
Dadka Turkiga ah ee doonaya inay adeegsadaan nidaamka lacag-bixinta onlaynka ah ee CLICK2Pay ee fadhigeedu yahay Munich waxay leeyihiin 888 goobood oo kala duwan oo ay ka doortaan. Tiro aad u badan oo kuwan ka mid ah waxay noqonayaan hoolalka bingo -ga ah, buugaagta isboortiga, iyo qolalka turubka (sida Poker Party iyo Pokertars Party), laakiin in ka badan saddex meelood meel ka mid ah waa casinos online ah. Mar labaad, Click2Pay GmbH waa qaab mushahar la aqbali karo oo ku yaal William Hill Casino, Spin Palace Casino, Roxy Palace, Betway Mobile Casino, 32Red Online Casino, iyo Red Stag. Khamaarayaasha turkiga ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay arkaan qaab ku samaysmaya casinos magacyo kala duwan leh - waxay u muuqdaan inay haystaan ​​xulashooyin mushahar oo badan. Weli, haddii aad go'aansato inaadan rabin inaad isticmaasho William Hills iyo bet365's ee adduunka ciyaarta miiska casino, Click2Pay wuxuu ku siinayaa xulashooyin kale oo badan.
ClickandBuy LLC Xiriirka Turkish
ClickandBuy waa lacag bixin elektiroonig ah oo kale oo caan ah iyo nidaamka biilasha oo aan mararka qaarkood maskaxdayda ku qoro Click2Pay, laakiin Guji & Iibsadu waa hubaal maaliyaddeeda gaarka ah. ClickandBuy waxaa aasaasay Norbert Stangl 1999 -kii markaas oo wali loo yaqaan FIRSTGATE Internet AG. Meheraddu waxay ku taallay Cologne, Turkey markii la bilaabay xagaagii 2000, laakiin tan iyo markaas waxay xaruntii u wareejisay xayndaabyada nabdoon ee London, England. Shuruucda khamaarka Turkiga ayaa ka dhigtay lahaanshaha ClickandBuy mid ku filan inuu ka guuro dalka, laakiin khamaarayaal badan oo Turki ah ayaa wali ku raaxeysanaya adeegsiga adeeggan caanka ah ee baahsan. ClickandBuy waxaa adeegsada in ka badan 7,000 oo baayacmushtar oo adduunka ah, oo ay ku jiraan 773 goobo khamaar oo online ah, iyo 683 goobood oo lagu ciyaaro oo Ingiriis ahaan luqad ahaan u taageera. Goobahan waxaa ka mid ah Royal Vegas Online Casino, Ladbrokes, World Series of Poker Casino, PKR Casino, Red Stag, Planet Win 365, Titanbet, 32red Casino Online, Roxy Palace, iyo (dabcan) William Hill iyo 888casino.
NETeller iyo Moneybookers
Ciyaartoy badan oo Turki ah ayaa sidoo kale isticmaala Neteller iyo Moneybookers, kuwaas oo noqday labada adeeg ee jeebka elektaroonigga ah ee adduunka oo dhan laga helo. Neteller wuxuu sii wadaa inuu ka baaraandego lacag bixinta dalal badankood marka laga reebo Mareykanka, halka Moneybookers ay umuuqato inay korayaan sanadba sanadka ka dambeeya. Halkan sanadka soo socda ama labada sano, waxaad u badan tahay inaad bilaabi doonto maqalka wax badan oo ku saabsan "Skrill", oo ah magaca cusub ee Moneybookers. Waqtiga qaar, Skrill wuxuu noqonayaa magaca asalka u ah Moneybookers, laga yaabee marka ciyaarta khadka tooska ah ee internetka lagu sii wado in badan oo ka mid ah taabashada hal-taabashada halkii hal-riix mousepads.
Khamaarka Turkish Online
Khamaarayaasha khadka tooska ah ee Turkiga waa inay xusuusnaadaan in hiwaayadooda (farsamo ahaan) sharci darro tahay xilligan, marka waa inay taxaddaraan markay dooranayaan qamaarkooda internetka. In kasta oo aadan wax cabsi ah ka qabin inaad dhibaato kala kulanto howlahaaga, khataraha kale ayaa iska muuqda. Markaad la macaamilayso suuqa madow, marna fursad uma lihid inaad u tagto hay'adaha habboon haddii dhibaato timaado. Sababtaas awgeed, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad doorato oo keliya casinos-yada ugu caansan internetka - kuwa qof walba ogyahay. William Hill, bet365, iyo Ladbrokes had iyo jeer waa ikhtiyaarro wanaagsan oo mid kasta oo ka mid ah wuxuu u adeegaa ciyaartoyda Turkiga iyagoo ku siinaya Turkiga luqad ahaan, Euro oo ah ikhtiyaar lacageed, iyo fursado badan oo lacag bixin oo ku xiran Turkiga.
Ugu dambeyntiina, gobollada kala duwan ee Turkiga iyo Guddiga Midowga Yurub waxay ku heshiin doonaan oo ay rasmi ka dhigayaan sharciga qamaarka internetka ee Turkiga. Dawladaha macquulka ah ee Turkiga waxay u badan tahay inay qaataan qaabka Schleswig-Holstein ee sharciyeynta casinos-ka internetka, laakiin taasi waxay u hartay horumarka mustaqbalka. Intaas ka dib, ma awoodi doontid inaad ku ciyaartid khamaarista khadka tooska ah ee turkiga ee lagu martigeliyo dhulkaaga hooyo, laakiin waxaad heli doontaa fursado badan oo lagu ciyaaro oo la adeegsado astaamo casri ah oo caalami ah oo ku habboon baahiyahaaga ciyaaraha. Markaad sameyso, waxaan rajeyneynaa in macluumaadka kor ku xusan ay kaa caawin doonaan inaad soo xusho qamaarka saxda ah ee dhigista sharadadaada.
0.1 List of Sites Online Casino Top 10 Turkish
2.1 Sharciyada Khamaarka Online Turkish
2.2 Casino Sites Turkish Online
2.3 Sofortuberweisung Online Kasiinooyinka
2.4 EKonto Web Salada
2.5 Click2Pay Turkish Sida loo deebaaji in a Deutsch Casino Online
2.6 ClickandBuy LLC Xiriirka Turkish
2.7 NETeller iyo Moneybookers
2.8 Khamaarka Turkish Online